Home News Xukumada oo Loolan Adag Kala Kulmeysa Shariif Xasan oo Siyaasad Cusub La...
Xukumada oo Loolan Adag Kala Kulmeysa Shariif Xasan oo Siyaasad Cusub La Ciyaaraayo iyo Musharaxiin Saxibadi ah oo Is Sharaxay
iyado dhawan ay soo baxeyn warar shegaya in Xukuumada Soomaaliya iyo Shariif Xasan Shiiq Adan ay isku qilaafeyn Cida badali karta Booska Jawaari uu banaeeyay.
Xasan Cali Kheyre aya bdhawaan u shegay in uu faraha kala baxo shaqsiga noqon laha Gudomiyaha Golaha Shacabka iyado kolkii hore Madaxweyne Shariis Xasan lo shegay in uuu faraha kala baxo Cida badali laheyd Jawaari hooshasina ay Xukumada u taalo.
Shariif Xasan aya hada ciyaar siyaasadeedkii lagu garanayay ciyaaraya,isagoona maalgalinya Shaqsiyaad ay saxibo dhaw yihiin.
Aadan Madoobe aya la amin sanyahay in uu yahay saxibka Shariif Xasan iyado uu shalay iclaamiyay in uu yahay Murashax u taagan Xilka Gudoonka Golaha Shacabka.
Xukuumada Xasan Cali Kheyre aya maal galineysa Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya kaasi oo Xukumada ay u qorsheysay in uu buuxiyo Boski uu ka baxay Maxamed Shiiq Cismaan Jawaari.
Wararka anu heleyno aya shegaya in Shariif Xasan uu kulamo kala duwan uu bilaabay haatan waxaana uu wada dadaal uu ku doonaayo in Xasan Cali Kheyre uusan kaga adkaan loolanka Booski ay ka saareyn Jawaari.